Ampidino TxtEditor ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (4.60 MB)
TxtEditor dia iray aminireo mpamoaka lahatsoratra hafa azonao ampiasaina raha mankaleo ilay Notepad mpamoaka lahatsoratra tsotra ao aminny solo-sainao ianao, ary manintona ny saina aminny rafiny tsotra. Raha heverina fa ny mpampiasa rehetra dia tsy tia mametraka fonosana aminny birao, dia anisanny zavatra tsy maintsy andramana izany noho ny asany haingana sy ny fahafahany.
Ny programa, izay afaka manova aminny endrika TXT sy RTF, dia mahatsikaritra rohy ankoatra ny Notepad, ary mamela anao hanampy rakitra sary ihany koa. Raha irinao dia azonao atao ny manampy ny fampahalalana momba ny daty sy ora ho azy ao aminny hafatrao. Azonao atao ny mieritreritra ilay programa, izay tsy nisedra olana nandritra ny fampiasana azy, ho toy ny kinova Notepad somary nohatsaraina.
Azoko antoka fa hahafinaritra anao ny mampiasa TxtEditor ary tsy mila mampiasa Notepad mahazatra intsony ianao.
Haben'ny rakitra: 4.60 MB